LibreOffice 7.0.4 inoenderera nekuvandudza kusangana neMicrosoft Office | Linux Vakapindwa muropa
Mwedzi nehafu mushure vhezheni yapfuura, Iyo Gwaro Nheyo akakanda LibreOffice 7.0.4, inova chikamu chemberi chehofisi yako. Kuverenga katsamba kakaburitswa nhasi, chimwe chinhu chavanogara vachitaura chinogara chichindibata, pamwe nekuti ndinofunga kuti zvese zvavanoita mune izvi zvishoma. Uye ndeyekuti TDF inoenderera ichishanda kuitira kuti software yayo ivandudze kuenderana neiyo yeMicrosoft, ndiko kuti, Hofisi inoenderera ichinyanya kushandiswa.
Kune rimwe divi, Iyo Gwaro Sisekelo rinotaurawo izvozvo 114 tsikidzi dzakagadziriswa, iyo ichavandudza kugadzikana, kuvimbika uye kuenderana kwambotaurwa. Iyo kambani inokurudzira vese vashandisi veLibreOffice kuti vadzokere kune iyi vhezheni, kusanganisira iyo 6.4 nhevedzano, sezvo yasvika kumagumo ehupenyu hwayo uye isingazogamuchire kumwe kugadziridza. Izvi zvinopesana nenyaya yekuti LibreOffice 7.0.4 haisati yapihwa seyakanakisa sarudzo yezvikwata zvekugadzira, saka ndinokurudzira kuti vashandisi vari kushandisa akanyanya kuyedzwa akateedzana vagare pairi kusvikira kugoverwa kwavo kweLinux kwave kurarama. V7.
FreeOffice 7.0.4 inogadzirisa makumi mapfumbamwe nemaviri
Iyo vhezheni itsva yave kuwanikwa kurodha pasi kubva ku purojekiti webhusaiti kune ese masisitimu akatsigirwa. Vashandisi veLinux vanogona kurodha pasi kodhi yayo, yayo DEB package kana iyo RPM, uye akasiyana Linux kugoverwa ari mune e7 akateedzana ivo vanofanirwa kugadzirisa mapakeji mumazuva mashoma anotevera.
Iyo inotevera vhezheni ichave yatove LibreOffice 7.0.5 uye ichasvika pakati paKurume. Zvingangodaro, apa ndipo apo Iyo Gwaro Sisekelo rinokurudzira iyo yechinomwe vhezheni hofisi yayo suite yezvikwata zvekugadzira futi. Iyo inotevera vhezheni ichasvika muna Chikumi uye ichave iyo iyo, kana pasina zvinoshamisira, inoratidza mucherechedzo wehupenyu hwekutenderera kweiyi nhevedzano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » LibreOffice 7.0.4 inoenderera nekugadzirisa mabugs nekuvandudza kuenderana neMicrosoft Office
GTK 4.0 yakatoburitswa uye inouya nekuvandudzwa kweOpenGL uye Vulkan uye nezvimwe